Homeसमाचारमिर्गौला दिएर मृ`त्युको मुखबाट बचा`एको प्रेमिकाले जब बिहे गर्न नमाने`पछि…
September 25, 2021 admin समाचार 1527
मिर्गौला रो`गबाट ग्रस्त आफ्नी प्रेमिका|लाई आफ्नो मृर्गौला दिएर बचाएका एक प्रेमि अहिले प्रेमिकाले विहेको प्रस्ताव स्विकार नगरेको भन्दै समाजिक सञ्जामा आएकाछन् ।
घटना लण्डनको हो । मिर्गौला दिएर मृत्युको मुखबाट त बचाए । तर मिर्गौला प्रत्या`रोपणको सफल शल्य`क्रियापछि प्रेमिले राखेको विहेको प्रस्ताव ठाडै अस्विकार गर्दा के गर्ने, के नगर्ने भएको भन्दै उनले समाजिक सञ्जालमा आफ्नो भावना पोखि`रहेका छन् ।
४९ वर्षीय सिमोन लुइसले आफ्नी ४१ वर्षिया प्रेमिका मेरी इम्मानुएल`लाई मिर्गौ`ला दिएका थिए ।सिमोन र मेरी बिच दुई दशकभन्दा बढी समयदेखिको माया प्रेम रहदै आएको उनले खुलाएका छन् ।
सन् १९९४–९५ को आसपास पहिलो`पटक भेटे`का सिमोन र मेरीले पहिलो भेटमै चुम्बन पनि गरेका थिए । त्यसका बाबजुद उनीहरू त्यसयता साथी मात्र रहे । तर, सिमोन भने त्यही`बेलादेखि मेरीलाई मनपराउन थालिसकेका थिए ।
स्टक ब्रोकर सेक्रे`टरीका रूपमा कार्यरत मेरी आफ्ना छोरा ड्वेनको हेरचाहमै व्यस्त हुन्थिन् । आफ्ना भाइसँग मिलेर सांगीतिक कार्य`क्रमको व्यवस्थापन सम्हाल्ने सिमोनले भने त्यो चुम्ब`न र मेरीलाई बिर्सिन सकेका थिएनन् । आफुले मन पराई सकेकी मरी`ले भने उनलाई आफ्नो असल साथीको रुपमा मात्रै सम्झदै आएको बताए`पछि उनी अहिले छाँगाबाट खसे जस्तै भएका छन् ।
स्टक ब्रोकर सेक्रेटरीका रूपमा कार्यरत मेरी आफ्ना छोरा ड्वेनको हेरचाहमै व्यस्त हुन्थिन् । आफ्ना भाइसँग मिलेर सांगीतिक कार्यक्रमको व्यवस्थापन सम्हाल्ने सिमोनले भने त्यो चुम्बन र मेरीलाई बिर्सिन सकेका थिएनन् । आफुले मन पराई सकेकी मरीले भने उनलाई आफ्नो असल साथीको रुपमा मात्रै सम्झ`दै आएको बताएपछि उनी अहिले छाँगा`बाट खसे जस्तै भएका छन् ।
२०१४ मा मेरी`लाई मिर्गौला सम्बन्धी रोगबाट ग्रस्त रहेको पक्ता लागेपछि त्यसपछिका दिन मेरीले तनावमा विताईन । उनको रोग निको बनाउन मिर्गौला प्रत्यारोपण नै अन्ति`म विकल्प रहेको डक्टरले बताए`पछि मेरीलाई झन तना`व भयो ।
November 8, 2020 admin समाचार 7138
अभिनेत्री सा’म्राज्ञी राज्य लक्ष्मी शाहले आफ्नी आ’माको स्वरमा रहेको गीतमा अ’भिनय गरेकी छन् । उनले आमा नेहा शाह’को ‘तिमी र म’ बोल’को गीतमा अ’भिनय गरेकी हुन् । ‘कहाँबाट आ’यौ तिमी ? को हौ तिमी ?
May 30, 2021 admin समाचार 2418
August 18, 2020 admin समाचार 26863
सुतेर पनि इम्युनिटी पावर बढाउन सकिने यस्तो छ जन’स्वास्थ्य विज्ञ डा. पाण्डेको सुझाव (218855)
सुशान्त केश’ले लियाे नयाँ मोड, रियाको भाइको ‘गोप्य च्याट’ बाहिरियो…हेर्नुहोस् (207783)
छोटो समयमै छिटो कपाल बढाउने तरीका यस्तो छ: थाहा पाहुनुहोस् (206930)
यसरी बनाउनुहाेस्: मात्र केही समयमानै तपाईंको पहेलो दाँत चम्किलो … (205398)